ऊर्जा Sistem शैली3हेडफोन समीक्षा | ग्याजेट समाचार
र हामी यससँग एक्युलिडेड ग्याजेटमा फर्कन्छौं सत्य ताररहित ध्वनि हेडफोनको समीक्षा। फेरि ऊर्जा Sistem को एक उत्पादन संग, जो यसको व्यापक सूची बाट प्रस्तुत गर्दछ ऊर्जा साइटम शैली 3। जम्पलाई एक पटक र सबैको लागि वायरलेस हेडफोनमा लिनको लागि अर्को उत्कृष्ट विकल्प र त्यो अप्रचलित केबललाई पन्छाउनुहोस्।
यदि तपाईं अझै ठूलो मोडमा प्रस्तावमा एक मोडेल वा अर्कोमा निर्णय गर्न सक्नुहुन्न भने, आज हामी तपाईंलाई एक धेरै राम्रो विकल्प प्रस्तुत गर्दछौं। एउटा उत्पादन निस्सन्देह तपाईंको आवश्यकताहरू पूरा गर्दछ, एक धेरै संग ध्वनि र स्वायत्तता मा राम्रो प्रदर्शन, र सबै भन्दा माथि, एक भाग्य लगानी गर्न को आवश्यकता बिना।
1 शैली,, तपाईंको शैलीमा तपाईंको संगीत
2 अनबक्सिंग ऊर्जा सिस्टम शैली 3
3 डिजाइन र शारीरिक उपस्थिति
4 सबै टेक्नोलोजी तपाईलाई आवाश्यक छ
5 प्राविधिक विवरण तालिका
शैली,, तपाईंको शैलीमा तपाईंको संगीत
जस्तो कि हामीले टिप्पणी गरेका छौं ताररहित हेडफोनको बजार लगभग असीम छ। हामी यति धेरै फर्महरूबाट यति धेरै विकल्पहरू फेला पार्दछौं, कि एक पटक हामीले अन्त्यमा वायरलेसमा स्विच गर्ने निर्णय गरिसकेपछि अन्तिम निर्णय सजिलो हुँदैन। खेल को लागि स्पष्ट गन्तव्य संग हेडफोनहरु छन्, जस्तै Ase०2 लेजर कि हामी केहि महिना अघि परीक्षण गर्न सक्षम छौं।
यदि तपाइँ के खोज्दै हुनुहुन्छ विवेकी हेडफोन, त्यो कुनै पनि समयमा तपाइँको पोशाक संग फिट, र कि एक प्रस्ताव राम्रो ध्वनि अनुभव, ऊर्जा Sistem शैली3विचार गर्न एक विकल्प हो। यी सबै, मा जोडियो एक सुरुचिपूर्ण डिजाइन र धेरै सावधान, उसले यी हेडफोनहरू बनाउँदछ बटन ढाँचा, साँच्चै रोचक छन्।
उर्जा सिस्टेमले उत्पादहरूको महान विविधता प्रदान गर्दछ जुन यो प्रत्येक कोटीमा प्रदान गर्दछ। र संगै शैली3एउटा खाली ठाउँ पनि प्रारम्भिक हेडफोनको बिच बनेको छ सुरुचिपूर्ण त्यो क्षणको तिनीहरूका लागि जो ध्यान आकर्षण गर्न चाहँदैनन्, तर एक गुणात्मक उपकरणको साथ छोड्न चाहँदैनन्। शैली रेखाले बजारको क्षेत्रलाई समेट्छ यस प्रकारको उत्पादनको माग के गर्छ, यदि यो तपाईको खोजीको कुरा मात्र हो भने, अमेजनमा अब ऊर्जा Sistem शैली3किन्नुहोस् छुट संग।
यदि तपाईं अपमानजनक "गम्मीहरू" बाट बिरामी हुनुहुन्छ भने जुनसँग आजका प्राय जसो हेडफोनहरू छन्। र तपाईं ती मध्ये एक बटन ढाँचाको साथ हेडसेट मन पराउनुहुन्छ, कि एकदम फिट हुन्छ र जुन थोरै तौलको हुन्छ, शैली score स्कोर अंक तपाईलाई चाहिएको हेडफोन बन्नको लागि।
अनबक्सिंग ऊर्जा सिस्टम शैली 3
यो शैली head हेडफोनको सानो बाकस भित्र हेर्ने समय हो। हामीले हामीले आशा गरेका सबै चीजहरू भेट्टायौं र हामी केही पनि मिस गरेनौं। को चार्जर बक्स, कुनै जेबमा बोक्नका लागि उत्तम आकारको साथ। बक्स बाहिर प्रस्तुत छन् हेडफोनयस अवस्थामा हामीले केही प्रतिलिपिहरू प्राप्त गर्यौं कालो रंग, बस तपाईंको बक्स जस्तै। यो धेरै बाहिर हुन्छ आश्चर्यचकित छ कि कति तौल दुबै बक्स र हेडफोन।
मुख्य तत्वहरूका साथै हामीसँग केही ब्रोशरहरू छन् प्रचार, र एक द्रुत उपयोग गाइड मुख्य कार्यक्षमताको साथ हेडफोनको। तिनीहरू पनि साथ छन् चार्ज केबल त्यो ढाँचा छ माइक्रो यूएसबी। जब हामी इयरबडमा हेर्दैछौं, हामीले विशिष्ट प्रतिस्थापन इयर प्याडहरू फेला पार्दैनौं।
डिजाइन र शारीरिक उपस्थिति
अब हामी हेर्छौं उपस्थिति ऊर्जा Sistem शैली3द्वारा देखाइएको। उत्पादन को निर्माण नयाँ केहि हैन, तर रंग संयोजन छनौट गरियो। को भित्र कालो रंग यो अन्तमा समाप्त हुन्छ हल्का खैरो र जसले तपाईंलाई भिन्नताको अत्यन्तै सुन्दर बिन्दु प्रदान गर्दछ। एक आकार ईयरफोनबाट अनिवार्य रूपमा हामीलाई AirPods को सम्झना दिलाउँछ, ग्लोबल सेट मा तिनीहरू यति धेरै एक जस्तै छैनन्।
El डिजाइन यो एक हो यी ऊर्जा Sistem हेडफोन को शक्ति। एक भएको मात्र होइन शहरी शैली र सुरुचिपूर्ण। यो पनि हो भौतिक ढाँचा ह्यान्डसेट को। हामीलाई थाहा छ कि प्रयोगकर्ताहरूको ठूलो हिस्सा हेडफोनलाई समर्थन गर्दैन जुन क्लासिक रबरमा कान भित्र रहन्छ। सही रूपमा फिट नहुँदा, वा उनीहरूले गरेको "खाली" प्रभावका लागि राम्रो छ, तर त्यहाँ धेरै जसो यी हेडफोनहरू खोजिरहेका छन्।
अमेजनमा उर्जा पाउँदा सिस्टेम शैली Buy खरीद गर्नुहोस्
प्रशंसित एयरपडहरूसँग तुलना अपरिहार्य छ एप्पल बाट हेडसेटको प्रारूप र यसको विस्तारित आकारको कारण तिनीहरूको शारीरिक उपस्थिति हामीलाई उनीहरूको सम्झना आउँछ। भित्री ईयरफोन भाग बिल्कुल उही आकारको हुन्छ। यद्यपि बाहिर रहिरहने उपकरणको शरीर यी अधिक तत्वहरू र थोरै कम गोल आकारको साथ भिन्न छ।
भाग जुन बाहिर छ छ फरक भाग जसमा फ्ल्याट खैरो भाग सम्मिलित गरिएको छ। रंग र सामग्रीको छनोट यस मोडेलमा सही देखिन्छ हामी other अन्य संयोजनहरू बीचमा छनौट गर्न सक्दछौं। यो बाह्य भागमा हामी फेला पार्दछौं सानो LED प्रकाश त्यो नीलो वा रातो र between्गका बीच परिवर्तन हुन्छ तपाईले हामीलाई प्रदान गर्नु भएको जानकारीमा निर्भर गर्दछ।
यो बाहिरी भागमा टच सेन्सरहरू छन् तिनीहरूले हामीलाई के प्रस्ताव गर्छन् चलाउनको लागि विभिन्न कमाण्डहरू। बायाँ वा दायाँ प्रेसको साथ हामी गर्न सक्दछौं खण्ड बढाउनुहोस् वा कम गर्नुहोस् प्रजनन को। दुई कुञ्जी स्ट्रोकको साथ हामी गर्न सक्दछौं रोक्नुहोस् वा पुनः बजाउनुहोस्। र हामी तिनीहरूलाई कन्फिगर गर्न सक्दछौं छिटो अगाडि वा पछाडि गीत। हाम्रो संगीतको पूर्ण नियन्त्रण, र पनि कलहरू o आवाज सहायक, तपाईंको जेबबाट उपकरण लिने बिना।
La चार्ज केस-होल्स्टर एक आकार छ आयताकार सही आकारमा कुनै पनि जेबमा फिट हुन्छ। ढक्कन खोल्दै हामी कसरी हेर्दछौं हेडफोन तेर्सो रूपमा रहेको छ फिटिंग पूर्ण रूपमा एक चुम्बकीय आधार हो कि तिनीहरूलाई राख्छ र लोड गर्दछ। वजन, भित्र हेडफोनको साथ पनि, वास्तवमै हल्का हुन्छ। भित्र निर्मित नरम स्पर्श प्लास्टिक हेडफोन जस्तै कालो रंगमा।
बक्सको अगाडि हामी फेला पार्दछौं चार एलईडी बत्तीहरू जुन हामीलाई चार्जको बारेमा जानकारी दिन्छ यसको। प्रत्येक बत्तीहरू कुल को २ 25% संकेत गर्दछ लोड हुँदैछ। तसर्थ, यदि हामीसँग सबै lights बत्तीहरू सकृय छन् भने, यो यो संकेत हो कि ब्याट्री भरिएको छ। पछाडि हामी फेला पार्दछौं चार्ज पोर्ट, माइक्रो USB ढाँचाको साथ.
सबै टेक्नोलोजी तपाईलाई आवाश्यक छ
यो थाहा पाउनु महत्वपूर्ण छ कि तपाई हेडफोनमा के पाउन सक्नु हुन्छ ती प्राप्त गर्नु अघि। ऊर्जा सिस्टेम अधिकतम गर्न को लागी उनीहरूको प्रयोग सरल। एक पटक हामीले तिनीहरूलाई हाम्रो स्मार्टफोन, कम्प्युटर वा ट्याब्लेटको साथ समिकरण गरेपछि, हामीले केवल तिनीहरूलाई केसबाट हटाउनुपर्नेछ ताकि तिनीहरू स्वत: जडान हुनेछन्। तपाईंको जडान ब्लुटुथ 5.0 कटौती बिना स्थिरता ग्यारेन्टी।
El अंतर्निहित माइक्रोफोन हामीलाई हाम्रो टचमा स्मार्टफोनको स्पर्श नगरी जवाफ दिईन्छ। कलमा प्राप्त गरिएको ध्वनी स्पष्ट र शोर बिना। र कलको अर्को तर्फ प्राप्त गरिएको एक पनि उत्तम छ। केहि चीज जसले यी हेडफोनको ढाँचा र डिजाइनलाई धन्यवाद सुधार गर्दछ। विश्वस्त छ? अमेजनमा अब ऊर्जा सिस्टेम शैली Get पाउनुहोस् सबै भन्दा राम्रो मूल्य।
हामीलाई मन पर्यो तिनीहरूले प्रस्तुत गर्न सक्षम छन् शक्ति तौल मा यति हल्का परिणामस्वरूप। पनि ध्यानमा लिनको लागि महत्त्वपूर्ण विवरण हुनु स्वायत्तता हामी भर पर्न सक्छौं। ऊर्जा Sistem शैली5प्रदान गर्दछ निर्बाध संगीतको hours घण्टा सम्म। र यसको चार्जर बक्सलाई धन्यवाद हामीसँग extra भन्दा बढी पूर्ण शुल्कहरू छन्। लामो संगीतको लागि पर्याप्त स्वायत्तता भन्दा बढि।
प्राविधिक विवरण तालिका
मोडेल शैली 5
कनेक्टिविटी ब्लुटुथ 5.0
पुग्नुहोस् १० मिटर सम्म
टच नियन्त्रणहरू प्लेब्याक र भोल्यूम
आवृत्ति 2.4 गीगा
अंतर्निहित माइक्रोफोन SI
हेडफोन ब्याट्री 30 mAh
स्वायत्तता4घण्टा
ब्याट्री केस चार्जर 400 mAh
स्वायत्तता 16 घण्टा
हेडफोन तौल4g
हेडफोन आयामहरू 42 एक्स 17
केस-चार्जर तौल 25 g
केस-चार्जर आयाम 70 एक्स 30
मूल्य 34.90 €
लि link्क खरीद गर्नुहोस् ऊर्जा Sistem शैली 3
La गुणस्तर र मूल्य बीचको सम्बन्ध यो धेरै राम्रो छ।
El भोल्यूम स्तर उनीहरूले प्रस्ताव गरेका अन्य मोडेलहरू भन्दा माथि छ जुन हामी परीक्षण गर्न सक्षम छौं।
La २० घण्टा सम्म स्वायत्तताकभर को लागी धन्यवाद यसले हामीलाई दिनभर संगीत दिन्छ।
को महान विविधता टच नियन्त्रणहरू दुबै हेडफोनमा।
होइन गन्नुहोस सक्रिय आवाज रद्दआजकल उच्च मागमा केहि छ तर यो कार्यको मूल्यको आधारमा भेट्टाउन यो समझनीय छ।
तिनीहरूसँग निकटता सेन्सर छैन ताकि प्लेब्याक रोकिन्छ जब हामी तिनीहरूलाई बन्द गर्छौं।
कुनै आवाज रद्द
कुनै निकटता सेन्सर छैन
ऊर्जा Sistem शैली 3
लेखको पूर्ण मार्ग: ग्याजेट समाचार » सामान्य » समीक्षा » ऊर्जा Sistem शैली3समीक्षा गर्नुहोस्
कम्प्युटरको लागि Minecraft मा सबै भन्दा समान खेलहरू